Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo ka qarxay magaalada Afgooye - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo ka qarxay magaalada Afgooye
January 23, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo ka qarxay magaalada Afgooye. [Sawirka: Reuters]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa galabta oo Axad ah ka bilaabmay gudaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Qof dadka deegaanka ah oo ku sugan gudaha Afgooye ayaa warbaahinta u sheegay in rasaasta qoryaha laga maqlayo dhammaan qeybaha magaalada.
Dagaalka galabta ayaa bilowday kadib markii dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gantarool kuyaala irida laga galo magaalada, sida ay goobjoogayaashu sheegeen.
Ma jirto faahfaahin deg deg ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka galabta.
May 8, 2017 Miinada wadada dhinaceeda lagu aaso oo ugu yaraan saddex askari oo katirsan dowladda Soomaaliya ku dishay gobolka Shabeellaha Hoose
Heavy fighting between Somali government forces and Al-Shabab fighters erupts in Afgoye town